साइबर सेक्युरिटी समिट २०१८ सम्पन्न, साइबर सुरक्षाका लागि सामुहिक प्रयासमा जोड – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
Home / आइसिटी इभेन्ट/गतिविधि / साइबर सेक्युरिटी समिट २०१८ सम्पन्न, साइबर सुरक्षाका लागि सामुहिक प्रयासमा जोड
ICT Khabar/आइसिटी खबर July 29, 2018	आइसिटी इभेन्ट/गतिविधि, शिक्षा/चेतना, समाज खबर Leaveacomment 837 Views
साइबर सुरक्षाका लागि विश्वव्यापी ऐक्यवद्धता जनाउँदै नेपालमा पहिलो पटक आयोजित २ दिने ‘सिस्को ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी समिट–२०१८’ सम्पन्न भएको छ । नेपाल (एनपीसर्ट)को मुख्य आयोजनामा आयोजित समिटमा साइबर अपराध, साइबर नीति र कानून तथा सुरक्षाका विभिन्न अभ्यासहरुबारे विश्लेषण र निदानका विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ ।
समिटले साइबर सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सरोकारवालाहरुबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा समिटले निश्कर्ष निकालेको छ । कार्यक्रमको उद्घाटनसत्रमा प्रमुख अतिथि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. जीवराज पोखरेलले साइबर सुरक्षा चुनौतीलाई न्यूनिकरण गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको भनाइ राखे ।
समिटका मुख्य वक्ता आइक्यान एसिया प्यासिफिकका रिजनल सेक्युरिटी, स्टाबिलिटी एन्ड रिजेलेन्सी म्यानेजर चाम्पिका वाइजायातुङ्गाले डोमेन नेम सेक्युरिटीका लागि विश्वभर अझै चेतना अभिवृद्धि हुन नसकेको बताए । उनले नेपालको राष्ट्रिय डोमेन (डट एनपी) पनि डोमेन नेम सेक्यरिटीमा पर्न नसकेको जानकारी दिए । उनले नेपालको राष्ट्रिय डोमेनलाई सरिक्षत गर्न साइबर सेक्युरिटीका विज्ञहरुको सामूहिक प्रयास आवश्यक भएको बताए ।
समिटमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न विषयवस्तुमा नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, अमेरिका र बेलायतका वक्ताहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सोअवसरमा क्लाउड कम्प्यटिङ एन्ड सेक्यरिटी, म्यानेजिंग रिस्क इन डिजिटल इनभाइरोमेन्ट, थ्रेट एन्टेलिजेन्स सेयरिङ, यनिफाइड थ्रेट म्यानेजमेन्ट , साइबर सरक्षाका लागि सचेतनालगायतका विषयमा वक्ताहरुले पेश गरेका कार्यपत्रमा छलफल तथा अन्तक्र्रिया गरिएको थियो ।
साथै साइबर सेक्यरिटी रिजिलेन्स विषयमा २ चरणमा विज्ञहरुबीच प्यानल छलफलसमेत भएको थियो । समिटमा सरकारी, व्यवसायिक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायक, शैक्षिक संस्थालगायका क्षेत्रबाट करिब २ सय जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
समिटकै अवसर पारेर पहिलो दिन शुक्रबार नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) र राष्ट्रिय कृषि तथा अनुसन्धान केन्द्र (नार्क)मा प्रि–समिट वर्कसप आयोजना गरिएको थियो । वर्कसपमा ‘साइबर सेक्युरिटी टेक्नोलोजी’ र ‘साइबर सेक्युरिटी क्याप्चर द फ्ल्याग (सिटिएफ)’ विषयमा सहभागीहरुलाई विभिन्न विधाका विज्ञहरुले क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरेका थिए ।
Previous फेसबुकमा भाइरसले अटो म्यासेज पठायो ! कसरी जोगिने ?
Next वाइफाईको पासवर्ड, सजिलै ह्याक हुने तरिका ‘पूरा जानकारी लिनु होस ।